Ikhaya Elithokomele, Lihlanzekile Futhi Linokuthula 2 - I-Airbnb
Ikhaya Elithokomele, Lihlanzekile Futhi Linokuthula 2
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Titi
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Titi izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indlu itholakala endaweni enhle nethule yaseGreenhills/Cincinnati, OH enhliziyweni yeWinton Wood Park. Ukufinyelela ekhaya kuhlanganisa amagumbi okulala amathathu angasese, igumbi elingaphansi elinendawo yangasese yokufunda noma ukusebenza, amagumbi okugezela amabili agcwele, ikhishi, indawo yokudlela, uvulandi wesikrini, uvulandi, igrill yegesi, indawo yokupaka emgwaqweni, kanye negceke elikhulu eliyihektare elingu-1. Izithuthi zomphakathi zitholakala eDowntown Cincinnati naseNyakatho Kentucky. imizuzu ukuya eTri County naseKenwood Malls nezinye izikhungo zokuthenga.
Indlu ayinalutho futhi ilungele ngokugcwele izivakashi ngekamelo ngalinye eliyimfihlo isivakashi ngasinye ngama-$30 nsuku zonke.
Igumbi elingaphansi elinendlu yokugezela ehlukile lingasetshenziswa ukufunda noma ukuxoxa ingxenye ephuma egumbini lokuphumula.
IGreenhills, i-Ohio iyindawo Yomlando Kazwelonke, ebingomunye wemiphakathi emithathu ehleliwe futhi eyakhiwe ngamabhande aluhlaza esizweni. (Eminye imiphakathi emibili yama-greenbelt iGreenbelt, Maryland kanye neGreendale, Wisconsin.) Okwenziwa uhulumeni ngeminyaka yawo-1930, inhloso yephrojekthi ye-federal greenbelt kwakuwukuhlinzeka ngemisebenzi kanye nokunikeza ukuphunyuka ezindaweni eziminyene emadolobheni ngokwakhiwa idolobhana elincane elinezindawo eziningi ezifana nepaki elizungezwe ibhande eliluhlaza. IGreenhills ukuphela kwemiphakathi ye-greenbelt egcine i-greenbelt yayo - Idolobhana lizungezwe ngokuphelele yiWinton Woods, ipaki likaNdunankulu weSifunda saseHamilton County Park. IGreenhills umphakathi ophephile onentelezi yedolobha elincane elimangalisayo elinemigwaqo ethule, izihlahla ezinhle, i-Village Commons ukuthi iyindawo yochungechunge lwekhonsathi yasehlobo neminye imicimbi yomphakathi, inethiwekhi yezindlela zokuhamba, ichibi lokubhukuda lomphakathi kanye nenkundla yegalofu, umtapo wolwazi womphakathi, nokunye okwengeziwe!
Ngokuklama, iGreenhills iwumphakathi ohambekayo, otholakala kalula kuzo zonke izingxenye zesifunda, ingaphakathi kwebanga elifanele lokushayela lezikhungo ezinkulu zokuqashwa, futhi iseduze nezindawo zokuthenga.
Angihlali endlini kodwa ngitholakala kalula noma nini.